Zimbabwe's Chamisa says he'll testify to inquiry only if president does | Africa News 24-7
Zimbabwean opposition Movement For Democratic Change (MDC) leader Nelson Chamisa addresses a media briefing in Harare
HARARE – Zimbabwean opposition leader Nelson Chamisa said on Thursday he would only testify before an inquiry into post-election violence that killed six people in August if President Emmerson Mnangagwa did the same.
A commission of inquiry led by former South African president Kgalema Motlanthe has heard evidence from security chiefs who this week denied soldiers had killed civilians and blamed Chamisa and other opposition leaders for inciting violence.
Police chief Godwin Matanga on Tuesday told the commission that Chamisa could be arrested any time for inciting violence. Chamisa said this was part of the pressure on him to recognise Mnangagwa as president.
Post -Election violence
South Africans paying tribute to Bra Hugh